Hjem > Forsikring
Annen forsikring Endring i konsultasjoner ved Ullevål Forsikring HivNorge HivNorges tilbud Hiv og covid-19 Hva er hiv Hvor kan man få støtte Jus Psykisk og sosial støtte Reiseforsikring Smitteveier og hvordan beskytte seg somali Testen er positiv Teste seg for hiv Trygg covid-19-vaksine
→ Tallaal covid-19 ammaan ah
Tallaallada covid-19 ammaan bay u yihiin (way qaadan karaan) dadka la nool hiv, sidaa waxaa sheegay UNAIDS. Dhakhaatiirta infakshinnada Noorwey ayaa ku taageeray taas, oo ku boorrinaya dadka la nool hiv inay qaataan tallaallada.
→ Isbeddellada la kulanka dhakhtarka (konsultasjoner) ee Isbitaalka Ullevål
Dhibaatooyinka shaqaalaha yaraanta ee rugta bukaan-socodka cudurrada faafa ee Isbitaalka Jaamacadda Oslo ee Ullevål, ee keenay cudurka koranaha, la kulanka dhakhtarka (konsultasjoner) ee wakhtiga Christmas-ka oo dhan wuxuu u dhici doonaa qaab taleefoon. Dhammaan baarista dhiigga waa in loo qaadaa sida caadiga ah.
→ Hiv-ka iyo Covid-19
Markaad la nooshahay HIV-ka, ma jirto halista sii kordheysa ee lagu qaado cudurka coronavirus ama aad ugu xanuunsato cudurka 'Covid-19'. Haddii aad leedahay habdhis difaaca jirka oo hooseeya (tusaale hadii aad 200 ka hoosayso tirada CD4) iyo cudurro kale oo halista ah, waxaa laga yaabaa inaad ku jirto kuwa halista sare u ah cudurka Koroonaha.
→ Xagee baad ka heli kartaa taageero
Norway gudaheeda, waxaa ka jira ururo dhowr ah oo adeegyo u fidiya dadka la nool cudurka HIV-ka. Hoos waxaad ka heli doontaa tusaalooyin. Meelahan oo dhan waxaad kula kulmi doontaa xirfadlayaal oo waxaad fursad u heli doontaa inaad kula xiriirto dadka kale ee la nool cudurka HIV-ka.
→ Soo bandhiga HivNorges
Haddii aad u baahan tahay talo sharci ama caawimaad si toos ah ula xiriirta ogaanshaha cudurka HIV-ka, HivNorge ayaa kaa caawin kara. Waxaan sidoo kale leenahay adeeg la-talin guud ah haddii aad qabtid su'aalo kale oo la xiriira HIV-ka.
Markaad caymiska qaadanayso, waxaa jira noocyo caymis ah oo kaaga baahan inaad bixiso macluumaad caafimaad. Kuwaas waxaa ka mid ah caymiska nolosha iyo caymiska naafada.
Markaad la nooshahay HIV-ka, waxaa jira xoogaa xuquuq iyo waajibaadyo ah oo aad leedahay. Dhamaan daaweynta cudurka HIV-ka ee Norwey waa lacag la’aan oo aan laga goyn karin, sida uu qabo sharciga xakamaynta caabuqa oo leh xeerar. Marar dhawr ah, waxaad sidoo kale heli kartaa lacag celin kharashyada qaarkood ee dhakhtarka ilkaha ah.
→ Taageero maskaxeed iyo mid bulshoba
HIV-ku waa xanuun loo arki karo in uu yahay cilad adag oo lala noolaado maxaa yeelay waxaa jira nacayb badan iyo aqoon yar oo ku saabsan xanuunka HIV-ka bulshada dhexdeeda. Sidaa darteed, waxay noqon doontaa muhiim inaad haysato qof ku siin kara taageero.
→ Hadii tijaabdu tahay in lagaa heley
HIV-ku maanta waa cilad-xanuun oo joogto ah, qofkuna waa la noolaan karaa mudo nolol dheer ah sida qof kasta oo kale. Si taasi u dhacdo, waa muhiim in la bilaabo daaweynta HIV-ka isla markiiba. Tani ma aha oo kaliya qofka dantiisa/qaybtiisa, waxay sidoo kale leedahay faa iidada ah inuu qofku noqdo mid ka aan qaadsiin karin caabuqa ka dib waqti yar oo daaweyn […]
→ Baadhitaanka hiv-ka
Sida kaliya ee lagu ogaan karo inaad qabtid cudurka HIV waa adigoo iska qaada badhitaan HIV.
→ Wadooyinka cudurka iyo sidii aad iskaga difaaci lahayd
Dadka la nool xanuunka HIV-ka, ee heley daawayn rasmi ah oo ku guulaystay baxnaaninta oo aan lahayn heerarka fayraska ee dhiiga ma qaadsiin karaan dadka kale ee HIV-ka leh. HIV-ka sidoo kale laguma qaado isdhexgalka bulshada, dhunkashada, is hab siinta, isla wadaagga koob, iwm.
→ Waa maxay HIV-ka
HIV-gu waa fayras weerara habka difaaca jirka. Marka uu fayrasku galo jirka, difaacyada ayaa tartiib tartiib u burbura, jidhkuna wuxuu u nuglaanayaa caabuqyada iyo cudurrada, haddii aadan helin daawo taas joojiso.
→ Hiv-ka ee Noorway
Hiv-ka Noorway waa ururka kaliya ee bukaan socodka ah ee kajira dalka Norwey dadka qaba/la-nool HIV-ka. sidoo kale waa urur siyaasaded daneynaya qofkasta oo uu saameeyo HIVku, oo ay kujiraan dadka isticmaala PrEP = daawada HIV-ka iyo dadka halista ugu jira caabuqa HIV-ga.
Kontortid: isniin - jimce 09.00-15.00